२०७७ जेष्ठ २३ गते , शुक्रवार प्रकाशित
कोरोना महामारीपछि फेरी पुरानै कुरा सुन्न थालिएको छ । विदेश गएका लाखौं युवा स्वदेश फर्किने छन् । गाउँ सम्झिने छन् । आफ्नै जमिनमा पसिना बगाउने छन् । स्वरोजगार बनेर समृद्ध देश बनाउन सहयोग गर्नेछन् । आशावादी हुनैपर्छ । किनकी भूकम्प र नाकाबन्दीको असर त नेपालमा मात्र थियो । थुप्रै देशले सहयोग गरे । पुननिर्माण करिब करिब सम्पन्न हुँदैछ ।
तर, कोरोना भाइरसले सिंगो विश्वलाई सताएको छ । विकसित देशमा नै बेरोजगारीको समस्या छ । जसको असर वैदेशीक रोजगारमा रहेका नेपालीमा पर्ने नै भयो । यता, नेपालमा पनि उद्योग, कलकारखाना करिब २ महिनादेखि बन्द छन् । विकासका आयोजनाहरु प्रभावित छन् । जसले अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पुर्याएको छ । उद्योगपति, व्यवसायीहरु नै टाउकोमा हात राखेर बसेका छन् । अझै पिडामा छन्, समाजको पिँधमा रहेका समुदाय । जो बन्दाबन्दीको दोश्रो दिनदेखि रोग र भोक दुबैसँग लडिरहेका छन् । दिर्घकालिन रुपमा पनि उनीहरु थप समस्यामा पार्नेवाला छन् ।
सरकारले वर्षैपिच्छे गरिबी निवारण, आधुनिक कृषि, स्वरोजगार भन्दै विभिन्न कार्यक्रम ल्याउँछ । अनुदानका लागि आवेदन दिन सूचना जारी गर्छ । व्यावसायिक फर्म भएकालाई बोलाइन्छ । प्राविधिक भाषामा लम्वेतान प्रतिवेदन लेख्नेका प्रतिस्पर्धा हुन्छ । सूचनाको पहुँच नभएका दिनभरी अरुको काम गरेर खाने गरिब किसानलाई स्थानीय सरकारले बाँडेको अनुदानबारे अत्तो पत्तो हुन्न । झन् जमिनै नभएको विपन्न परिवारका लागि सरकारको त्यो कार्यक्रम कागलाई बेल पाकेजस्तै छ । फलस्वरुप स्थानीय जनप्रतिनिधीका आसेपासेलाई स्वाद परिरहेको छ । अनि धन भएकाहरुले फर्म खोलेर सरकारी अनुदानमा रजाईं गरिरहेका छन् । आगामी चुनावमा भोट बटुल्न मद्दत मिल्ने भएकाले जनप्रतिनिधीहरु पनि मख्ख छन् ।
लाग्छ, सरकार एउटा बिरुवामा मल र पानी हालिरहेको छ । अनि अर्को बिरुवा बढ्दै बढेन भनिरहेको छ । पहुँचवालालाई पोसेर किन विपन्नहरुको पेट र पुन्तुरो जति नै गरे पनि भरिएन ? भनेर प्रश्न गरिरहेछ । यही व्यवस्थाको निरन्तरताले कृषि फर्महरु थपिएलान् । केही युवा रोजगार बन्लान् । विपन्न, दलित र सिमान्तकृतको स्थिति ज्यूँका त्यूँ रहन्छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना हावा भरेको बेलुन जस्तो मात्रै हुनेछ । त्यसैले धन भएकालाई भन्दा मन भएका किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
कृषकमा सूचनाको पहुँच अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो । स्थानीय संचारमाध्यमलाई हामीले यो कुरामा खासै उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं । संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालय पाँच मिनेटको भिडियो सन्देश बनाउन लाख लाख खर्च गर्छ । अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था आधा घण्टाको सामाजिक फिल्म बनाउन लाखौं खर्चिन्छन् । तर, भिडियोको पहुँच र प्रभावकारिताबारे मतलब कसलाई ? त्यो रकमले स्थानीय तहमा रहेको एउटा सामुदायिक रेडियोले वर्ष दिनसम्म विभिन्न विषयमा गज्जबका कार्यक्रम बजाउन सक्छ । पिँधमा रहेकाहरुको आवाजलाई सरोकारवालासम्म पुर्याउन सक्छ । आवश्यक सूचनासँगै कृषि कर्मका सफल अभ्यासलाई प्राथमिकता दिन सक्छ । किसानका समस्याबारे सरोकारवालालाई जमघट गरेर बहस र पैरवी गर्दै समाधानको लागि ताकेता गर्न सक्छ । तर, खै किन हो विरुवामा होइन, बालुवामा पानी हाल्दा नै खुशी देखिन्छन्, संघ संस्थाका प्रतिनिधि र कर्मचारी ?
त्यसैले कृषि पेशा अपनाएपछि कम्तिमा वर्षदिन ढुक्कले खान पुग्ने अनि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक कर्म गर्न अरुको भर पर्नु नपर्ने कुराको सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । त्यसपछि मात्र कृषि पेशाले विपन्न, दलित र सीमान्तकृत युवाहरुलाई तान्न सक्छ । खाद्यान्नको मागलाई धान्न सक्छ । भोकमरीबाट बचाएर सम्पन्नताको यात्रातर्फ उन्मुख गराउन सक्छ । होइन भने नेपालमा कृषि क्रान्ति फगत सपनामै सिमित रहन्छ । बिर्सनै नहुने कुरा, श्रम गर्ने वर्गलाई समेट्न नसके कृषि क्रान्ति, हतियार बिना युद्धको कल्पना गरेजस्तो मात्र हुनेछ । Email- journalistjang@gmail.com